Sida Loo Codsado Amaahda PPP | Habka Talaabo-Tallaabo - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Amaahda PPP | Habka Tallaabo-Talaabo ah
Barnaamijka Ilaalinta Paycheck (PPP) wuxuu bixiyaa deymo dulsaar yar oo laga yaabo in gebi ahaanba la cafiyo, haddii aad tahay mulkiile keligiis ah, iskii u shaqeysta, ganacsi yar oo leh shaqaale, ama qandaraasle madax banaan.
Sida loogu qalmo amaahda PPP waa mid ka mid ah qaybaha aadka u wareersan ee Barnaamijka Ilaalinta Lacag-bixinta (PPP).
Tilmaantan tallaabo-tallaabo ah ayaa kugu dhex socon doonta codsigayaga deynta PPP si aad u soo gudbiso, u oggolaato, oo aad u maalgeliso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Waa maxay Deynta PPP iyo maxay ka dhigan tahay?
Amaahda Ilaalinta Paycheck (PPP) waa deyn ay dowladdu taageerto oo laga yaabo in la cafiyo si loo caawiyo ganacsiyada yaryar iyo ururada ay la kulmeen dhibaatooyin dhaqaale oo ka dhashay dillaaca COVID-19.
Amaahiyeyaasha buuxiya shuruudaha waxay heli karaan ilaa 2.5 jeer kharashaadka mushaharkooda bishii.
Amaahda PPP waxa loo isticmaali karaa in lagu daboolo mushaharka iyo kharashyada kale ee la xidhiidha masiibada, iyo kharashyada u qalma ee la galay/la bixiyay 24ka toddobaad ee ugu horreeya ka dib marka la helo lacagta amaahda waxay u qalmi kartaa cafiska deynta.
Baadhid: Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
Waa maxay faa'iidooyinka deymaha Barnaamijka Ilaalinta Jeeg-bixinta?
Amaahda PPP waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada yaryar in ay casriyeeyaan mushaaraadkooda oo ay sii wadaan bixinta lacagaha muhiimka ah ee la xiriira mushaar bixinta sida kirada iyo adeegyada. Waxaan u isticmaali karnaa deynta ujeedooyinka soo socda oo dhan:
Magdhaw sida mushahar, mushahar, guddiyo ama magdhow la mid ah ilaa $100,000
Bixinta talooyinka kaashka ah ama wax u dhigma
Lacag bixinta fasaxa, waalidka, qoyska, caafimaadka, ama fasaxa jirada
Gunnada cayrinta ama kala-tagga
Bixinta manfacyada hawlgabka
Aragtida kooxda, ilkaha, naafanimada, ama caymiska nolosha
Bixinta canshuuraha gobolka ama degmada ee lagu qiimeeyay magdhowga shaqaalaha
Kharashyada daryeelka caafimaadka ee la xidhiidha dayactirka caymiska daryeelka caafimaadka kooxda inta lagu jiro fasaxa jirada, caafimaadka, ama qoyska, iyo sidoo kale khidmadaha caymiska
Lacag bixinta dulsaarka amaahda (laakin ma aha bixinta hore ama bixinta maamulaha amaahda)
Ballanqaadyada deynta kale ee la galay ka hor Febraayo 15, 2020 waxay ku xiran tahay dulsaar.
Dib u maalgelinta SBA EIDL ee la helay inta u dhaxaysa Janaayo 31st iyo Abriil 3, 2020
Kharashyada taageera hawlaha ganacsiga, alaabta ama bixinta adeegga, sida software-ka ganacsiga ama adeegyada xisaabinta daruuraha.
alaabta ama bixinta adeeg
habaynta, lacag bixinta ama dabagalka ama kharashaadka mushaharka, ilaha dadka, iibka, iyo hawlaha biilasha
xisaabinta ama la socodka saadka, alaabada, diiwaanada, ama kharashyada
Kharashyada alaab-qeybiyaha ee daboolan
Kharashyada ilaalinta shaqaalaha ee daboolan
Kharashyada burburka hantida waa la daboolay.
Arag sidoo kale: Sida Loo Codsado Amaah Ganacsi
Waa maxay Shuruudaha Amaahda ee Barnaamijka Ilaalinta Lacag-bixinta?
Si aad ugu qalanto deynta PPP, shirkaddaadu waa inay buuxisaa shuruudaha soo socda:
Laga bilaabo Febraayo 15, 2020, shirkaddaadu waxay u furnayd ganacsi.
Waxaad leedahay in ka yar 500 oo shaqaale ah.
Waxaad tahay madax-bannaani, mulkiile keligiis ah, qof iskii u shaqeysta, ama lammaane ganacsi (inkastoo hal codsi PPP la soo gudbin karo shuraako kasta).
Waxaad lahayd shaqaale aad u bixisay mushahar, iyo Foomka 1099-MISC waxaa loo isticmaalaa in lagu soo gudbiyo canshuurta mushaharka. (Si kastaba ha ahaatee, 1099 lacag-bixineed laguma dari karo xisaabinta mushaharka.) Tani waxay run u tahay qandaraaslayaasha madax-bannaan ee lacag bixinta sidoo kale.
Sida lagu qeexay SBA, waxaad tahay walaac ganacsi yar.
Sidoo kale, xaqiiji taas:
Xaaladda dhaqaale ee hadda jirta awgeed, waxaad u baahan doontaa inaad codsato deyn.
Lacagaha waxaa loo isticmaali doonaa in lagu hayo shaqaalaha, lagu bixiyo mushaharka, iyo/ama lagu sameeyo deyn, kiraysi, iyo lacag-bixinaha tamarta.
Ma aadan codsan amaah PPP ama EIDL isku ujeeddo weli (isla muddadaas).
Ma aadan helin dayn PPP ama EIDL isku ujeeddo ah laga bilaabo Febraayo 15, 2020 ilaa Disembar 31, 2020 ( isla muddadaas).
Akhri Sidoo kale: Waa Maxay Amaahda PPP? Guudmarka, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Sidee loo xisaabiyaa Amaahda PPP ee Barnaamijka Ilaalinta Mushaharka?
Amaahda PPP waxa la xisaabiyaa iyadoo la isticmaalayo 2.5 jeer kharashyada mushahar bixinta ee shirkaddaada (ama kooxdaada).
Waxaad codsan kartaa 3.5 jeer kharashkaaga mushaharka bishii ee Sawirkaaga Labaad haddii aad leedahay makhaayad, hudheel, ama meel toos ah oo leh koodka NAICS ee ka bilaabmaya "72."
Magdhawgu waxa uu ku jiraa kharashyada mushahar bixinta, iyo sidoo kale kharashyada kale ee la xidhiidha mushaharka sida lacagaha hawlgabka, cashuuraha mushaharka ee gobolka iyo degmada, bixinta fasaxa ama fasaxa mushaharka, kharashyada daryeelka caafimaadka kooxda, iyo gunnada kala-tagga ama ka saarida.
Booqo Qiyaasta deynta PPP Si aad u faahfaahiso waxa ku jira oo laga saaray, iyo sidoo kale qiyaasta xajmiga deynta PPP ee mustaqbalka.
Akhri Sidoo kale: Amaahda Qaadashada Ganacsiga
Sida Loo Codsado Amaahda PPP | Habka Tallaabo-tallaabo ah
Kahor Intaadan Bilaabin
Si loo hubiyo in habka codsigu u socdo sida ugu macquulsan, soo ururi dukumeentiyada soo socda ka hor inta aanad bilaabin.
Waxaad u baahan doontaa walxahan soo socda si aad u dhamaystirto codsiga:
Dhammaan noocyada ganacsiyada:
Dhammaan milkiilayaasha leh 20% ama ka badan saamiga shirkadda waa inay keenaan nuqul ka mid ah aqoonsiga ay dawladdu bixisay.
Caddaynta inaad ganacsi ku jirtay ama ka hor Febraayo 15, 2020 ayaa looga baahan yahay dhammaan noocyada ganacsiyada:
Haddii aad leedahay shaqaale W2, waa inaad:
Warbixinta Geedi Socodka Mushahar-siinta Xisbiga 3aad laga bilaabo Febraayo 2020
Foomka IRS 941 laga bilaabo Q1 2020
Haddii aadan haysan wax shaqaale W2 ah:
Warbixinta Bangiga laga bilaabo Febraayo 2020
Kharashka Macmiilka laga bilaabo Febraayo 2020
Waxaad u baahan doontaa waraaqaha cashuurta ee ku habboon ee aad u isticmaashid si aad u xarayso cashuurtaada dhammaan ganacsiyada:
Bixi dukumeenti kasta oo canshuur xereyn ah oo shirkaddaadu isticmaasho:
Foomka 1120 waa laba nooc oo foom canshuureed oo kala duwan.
Foomka 1040 oo wata Jadwalka C
Soo Celinta Canshuurta Ganacsiga oo Buuxa (haddii kuwa kore midkoodna uusan khuseyn).
Waxaad u baahan doontaa caddaymahan soo socda si aad u caddayso kharashyadaada mushaharka haddii aad leedahay shaqaale W2:
Dooro mid ka mid ah kuwan soo socda:
Shaqaalahaaga, W2s iyo W3s ayaa looga baahan yahay.
Foomka IRS 944 (Adeegga Dakhliga Gudaha)
Foomka IRS 941 (Adeegga Dakhliga Gudaha) (dhammaan 4-ta rubuc)
Warbixinta Geedi Socodka Mushaharka 3-aad
TALLAABADA 1: Abuur ama gal Akoonka Lendio
Si aad u abuurto astaanta amaahda Lendio, buuxi foomka hoose. Guji "Sign in" haddii aad hore u leedahay akoon.
TALLAABADA 2: Fur codsigaaga PPP oo gal.
Xaqiiji haddii aad codsanayso deynta PPP ee koowaad ama labaad ka dib markaad sameysato akoon Lendio ama aad gasho akoonkaaga jira oo aad bilowdo codsiga PPP.
TALLAABADA 3: Laba jeer hubi Xogta Ganacsiga ee jirta
Xaqiiji in ciwaanka uu sax yahay, oo ay ku jiraan 5-god sib code (waxaa muhiim ah in la ogaado in kani yahay 5-god sib code, ma aha 9-god sib code).
Taariikhda Bilaabashada Ganacsiga:
Geli taariikhda bilawga shirkaddaada. Taariikhda bilawga ahi waa inay u dhigantaa taariikhda la xareeyay Xoghayaha Dawladda.
Xaqiiji inaad dooratay nooca ganacsiga saxda ah. Tani waxay saameyn ku leedahay dukumeentiyada aad u baahan doonto inaad gudbiso.
Xaqiiji in aad keentay lambarka aqoonsiga cashuurta ee 9-god ah. Hubi in aysan jirin khaladaad iyo in nambarka aqoonsiga uu dhererkiisu yahay sagaal lambar.
Noocyada ganacsiga qaarkood, aqoonsiga cashuurtu wuxuu noqon doonaa lambarka Sooshal Sekuuritiga ee mulkiilaha. Kuwa kale waxay u baahan doonaan EIN (Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha).
Xaqiiji in tirada shaqaaluhu ay u dhexeyso 1 ilaa 500. 1 waxaa loogu talagalay mulkiilayaasha keligood ah iyo 1099 shaqaale (0 ma aha gelitaan ansax ah).
Celceliska Mushaharka Bisha:
Qodobkani wuxuu saameeyaa lacagta ugu badan ee deyntaada waxaana la xisaabin karaa 2019 ama 2020. Si loo caddeeyo mushahar bixinta, waxaad u baahan doontaa waraaqaha cashuuraha ee la xidhiidha.
Qadarka amaahda la codsaday:
Qadarka amaahdu waa inuu noqdaa 2.5 jeer celceliska kharashyadaada mushaharka ee bishii (oo lagu daray wixii amaah ah ee dhaawaca Musiibada Dhaqaalaha ee la helo, haddii ay khuseyso).
Waa inaysan noqon eber dollar. Boqolaal milyan oo doollar yaan loo baahnayn. Waxaad u isticmaali kartaa xisaabiyaha amaahda ee PPP si aad u hesho gargaar.
Ka jawaab 8 su'aalood oo guud oo ku saabsan ganacsigaaga ka dib markaad gujiso "Next." (Codsadayaasha isku aadka labaad waa in ay galaan rasiidhada guud iyo kharashyada 2019 iyo 2020 ka hor inta aanad ka jawaabin.) U gudub tillaabada 5 haddii aad tahay codsade sawir-qaadis ah.)
TALLAABADA 4: Dakhliga Dhimista (Isbar-bardhigga Labaad Keliya)
Waa inaad awood u yeelatid inaad muujiso dhimista dakhliga ugu yaraan 25% si aad ugu qalanto Isku aadka Labaad.
Rubuc kasta 2019 iyo 2020, geli rasiidhadaada guud.
Geli kharashaadkaaga mid kasta oo ka mid ah rubuca 2019 iyo 2020.
Kadib markaad laba jeer hubiso macluumaadka, dhagsii "Next." Codsigaaga waxa ku jiri doona qoraal maaliyadeed oo buuxiya shuruudaha caddaynta ee SBA.
Ka dib markaad gujiso 'Next,' hubi si aad u aragto in mulkiiluhu is beddelay.
TALLAABADA 5: Xaqiiji lahaanshaha
Ku xaqiiji in qof uu leeyahay lahaanshaha 20% ama ka sareeya ee shirkadda bogga ugu horreeya ee "Macluumaadka Mulkiilaha".
Haddi ay arintu sidan tahay, fadlan gali boqolkiiba lahaanshaha aad adigu (codsaduhu) leedahay, iyo sidoo kale mulkiilayaal kasta oo dheeraad ah oo leh 20% saamiga lahaanshaha, adoo isticmaalaya xidhiidhka u dhow bogga hoose.
Fadlan tus oo xaqiiji in laguu oggol yahay inaad buuxiso codsiga PPP adoo matalaya meheradda aad codsanayso haddii qofna 20% lahaanshaha shirkadda.
Boqolkiiba lahaanshaha waa in ay ka badan tahay eber.
TALLAABADA 6: Xaqiiji dukumentiyada aqoonsiga
Waa in aad soo rartaa oo aad baartaa dukumeentiyada aqoonsiga ee muhiimka ah bogga "Urur Identification & Checker Voided" bogga. Si loo xaqiijiyo codsiga PPP oo dhamaystiran, laba jeer hubi wax kasta oo aad hore u soo galisay oo ku dar wixii waraaqo ah ee maqan.
Fadlan ku dheji lifaaqyada soo socda codsigaaga haddii aanad horeba u lahayn:
Dhammaan milkiilayaasha ganacsiga ee haysta 20% ama in ka badan ee shirkadda waa in ay haystaan ​​shatiga darawalnimada: Milkiile kasta, koobiga midab buuxa ee hore iyo dhabarka ee shatiga darawalnimada ansax ah. Hubi si aad u aragto in liisanka darawalku aanu dhicin.
Noocyada kale ee aqoonsiga rasmiga ah
TALLAABADA 7: Xaqiiji dukumentiyada mushaar bixinta
Fadlan soo rar dhammaan dukumiintiyada muujinaya caddaynta celceliska mushaharkaaga bishii. Qaybtani waa ikhtiyaari haddii aadan haysan wax shaqaale W2 ah.
Looga baahan yahay noocyada ganacsiyada qaarkood:
Foomka IRS 944 & Oggolaanshaha IRS qoraal ahaan
Foomamka W-2 iyo W-3 ayaa looga baahan yahay dhammaan shaqaalaha.
Warbixinta Processor-ka Mushahar-siinta Xisbiga 3-aad
Guji 'Next,' ka dibna soo rar dukumeentiga canshuurta ee u dhigma habka xereynta canshuurta:
Jadwalka K-1s ee lammaane kasta
U Shaqeeynta Kalinimo:
Foomka 1040 (Waa inuu ku jiraa Jadwalka C)
LLC Xubin Badan oo leh Shaqaale, Xubin Keli ah, Xubin Keli ah oo Shaqaale leh:
Foomka W-2 iyo foomka W-3
Foomka IRS ee 944
Foomka IRS 941 (dhammaan qaybaha)
Xubin Keliya LLC & Xubin Badan oo Aan Shaqaale Lahayn:
Dhammaan kuwa kale ee leh ama aan lahayn shaqaale:
Soo Celinta Cashuurta Buuxa
TALLAABADA 8: Xaqiiji dukumeentiyada Canshuurta
Soo rar dukumeentiga canshuurta ee u dhigma habka xereynta canshuurta:
Tallaabada 9: Dukumiintiyo Dheeraad ah
Iyada oo ku xidhan nooca ganacsigaaga, waxaad u baahan doontaa inaad soo rarto dukumeentiyada soo socda:
Warbixinta Habaynta Mushaharka 3-aad ee laga bilaabo Febraayo 2020
Feebarwari 2020 Warbixinta Bangiga (2019 haddii xisaabinta mushaar bixinta ay tahay 2019)
Kharashka Macmiilka laga bilaabo Febraayo 2020 (2019 haddii xisaabinta mushaar bixinta ay tahay 2019)
Foomka IRS 1099-MISC laga bilaabo 2020 (2019 haddii xisaabinta mushaar bixinta ay tahay 2019)
Foomka IRS 1099-K laga bilaabo 2020 (2019 haddii xisaabinta mushaharka laga bilaabo 2019)
TALLAABADA TOBAN: Helitaanka Xogta Dadweynaha (Ikhtiyaar)
TALLAABADA 10: Macluumaadka Dadweynaha (Ikhtiyaar)
Geli xogtaada tirakoobka Siideynta gabi ahaan waa ikhtiyaari wax raad ahna kuma laha go'aanka amaahda.
Macluumaadka waxaa loo ururiyay oo kaliya ujeedada ka warbixinta barnaamijka.
TALLAABADA 11: Xaqiijinta E-Sign
Waxaa soo dhawaaday waqtigii magacaaga laynka saari lahaa. Fadlan dib u eeg macluumaadka soo socda ka hor inta aanad dib u soo gudbin codsigaaga PPP:
Xaqiiji in codsiga uu ku jiro magacaaga sharci oo dhan.
Hubi in Lambarka Bulshada uu sax yahay (9 nambar).
Geli taariikhda dhalashada codsadaha (meel cusub).
Jinsiga Codsadaha: "Lab," "Dumar," ama "Lama Shaacin" waa ikhtiyaarrada. SBA waxay amar ku bixisay in xogtan tirakoobka la diiwaan geliyo si ay uga warbixiso barnaamijyadeeda.
Saxeex, cadee, ka dibna soo gudbi! Tani waa tallaabo lagama maarmaan u ah habka kaydinta iyo soo dejinta wixii isbeddel ah.
TALLAABADA 12: Ku Soo Dhawoow Talaabada U Danbaysa!
Waxaa lagu wadaa inaad tagto hadda markaad si guul leh u gudbisay codsigaaga!
Ma xiisaynaysaa inaad wax badan ka barato tillaabooyinka xiga ee hawsha? U fiirso waxa dhacaya marka aad gudbiso codsigaaga.
Sida loo Buuxiyo Codsiga Amaahda ee PPP
Tallaabada 1: Gal Koontadaada PPP
Markaad soo gudbiso codsiga amaahda PPP SBA.com®, waxaa laguu wareejin doonaa codsiga PPP ee lammaanahayaga. Waa inaad mar hore ku jirtaa boggan haddii aad hadda gudbisay codsigaaga.
Waxaad codsigaaga la buuxin doontaa lammaaneheena, ka dibna waa la dhammeyn doonaa oo loo gudbin doonaa deyn bixiyaha suuqa deymaha PPP ee la ansixiyey ee lammaaneheenna marka uu helo dhammaan macluumaadka iyo dukumentiyada ku habboon.
Waa kuwan sida loogu soo celiyo codsigaaga haddii aad mar hore ka tagtay bogga codsiga. Lammaanahayagu waa inuu kuu soo diro iimayl ay ku jiraan macluumaadkaaga gelitaanka bogga codsiga.
Haddii aadan heli karin iimaylkan, waxaad wali gali kartaa boggaga codsiga adiga oo dib u dejinaya eraygaaga sirta ah ciwaanka iimaylka ee la xidhiidha codsigaaga amaahda.
Haddi aad ka gasho marinka lammaanaha ee SBA.com® ama lammaaneheenna, macluumaadkaaga gelitaanka waxa ay ahaan doontaa sidii hore. Dooro 'Edit Application' marka aad gasho bogga codsiga si aad uga gudubto macluumaadkaaga jira oo aad u buuxiso wixii banaanaado ah.
Waxaad u baahan doontaa inaad halkan ka qaado tillaabooyin dheeraad ah si aad codsigaaga ula dhammaystirto lammaaneheenna oo aad u gudbiso amaah-bixiye.
Talaabada 2: Cusbooneysii ama Xaqiiji Macluumaadka Ganacsiga Jira
Hubi in qaybtan si buuxda loo buuxiyay. Hoos waxaa ku yaal qaybo yar oo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato.
Xaqiiji in ciwaanka uu sax yahay, oo ay ku jiraan 5-god sib code (waxaa muhiim ah in la ogaado in kani yahay 5-nambar zip code, ma aha 9-god sib code).
Geli ama hubi inaad siisay aqoonsi 9-god ah oo canshuur ah meheraddaada. Hubi in aysan jirin khaladaad iyo in nambarka aqoonsiga uu dhererkiisu yahay sagaal lambar.
Qadarka amaahda ee la codsado: Qadarka deyntaadu waa inay ahaataa 2.5 jeer celceliska kharashyadaada mushaharka bishii. Waa inaysan noqon eber dollar. Boqolaal milyan oo doollar yaan loo baahnayn. Waxaad u isticmaali kartaa xisaabiyaha amaahda ee PPP si aad u hesho gargaar.
Hubi in tirada shaqaaluhu ay u dhexeyso 1 iyo 500. Geli 1 mulkiilayaasha keligood ah iyo 1099 shaqaale ah. 0 ma aha qiime sax ah
Tallaabada 3: Kudar Shuruudaha Macluumaadka Ganacsiga Cusub
Goobahan cusub ee qasabka ah waa in lagu buuxiyaa isla bogga "Macluumaadka Ganacsiga" ee codsiga.
Taariikhda xeraynta Xog-hayaha Gobolkaagu waa inay la mid noqotaa taariikhda taariikhda bilawga ganacsigaaga.
Bilow teeb qorida warshadahaaga, ka dibna ka dooro liiska hoos-hoosaadka ee soo muuqda. Haddii warshadahaaga aan lagu qorin, dooro midka kuugu dhow. Warshad la'aanteed, SBA ma oggolaan karto codsi.
Tallaabada 4: Xaqiiji ama Geli Lahaanshahaaga
Ku xaqiiji saamiga lahaanshaha codsadaha bogga hore ee “Macluumaadka Mulkiilaha”. Boqolkiiba lahaanshaha waa in ay ka badan tahay eber.
Tallaabada 5: Kudar ama Xaqiiji Macluumaad Dheeraad ah oo Mulkiilaha
Taas ka dib, buuxi ama laba jeer hubi dhammaan macluumaadka loo baahan yahay mulkiilayaasha dheeraadka ah (haddii ay jiraan). Waa inaad ku darto macluumaadka qof kasta oo leh ugu yaraan 20% saamiga shirkadda.
Dhammaan goobaha ku yaal bogga "Milkiilaha Dheeraadka ah", oo ay ku jirto taariikhda dhalashada, waa in la buuxiyaa. (Bogga "E-Sign", waxaa sidoo kale lagaa codsan doonaa inaad bixiso taariikhda dhalashada milkiilaha codsanaya.)
Waxaad u baahan doontaa koobi midab ah oo ah xagga hore iyo xagga dambe ee shatiga darawalnimada mulkiilaha kasta. Qaybta "Dukumentiyada" (oo ku xiga), waxaa lagaa codsan doonaa inaad soo geliso nuqullada. Waxaan rabnay inaan ku siino ogeysiis badan si aad u diyaargarowdo).
Tallaabada 6: Xaqiiji ama Soo rar Dukumentiyada
Si loo xaqiijiyo codsiga PPP oo dhammaystiran, waa inaad keentaa dhammaan dukumeentiyada muhiimka ah ama aad xaqiijisaa in wax kasta oo hore loo keenay ay sax yihiin oo ku dar dukumeenti kasta oo kaa maqan bogga "Soo rar Dukumentiyadaada".
Fadlan soo rar lifaaqyada soo socda haddii aan horay loogu darin codsigaaga:
Dhammaan milkiilayaasha ganacsiga ee haysta 20% ama in ka badan ee shirkadda waa inay haystaan ​​shatiga darawalnimada: Milkiile kasta, koobiga midabka hore iyo dhabarka ee shatiga darawalnimada oo sax ah. Hubi si aad u aragto in liisanka darawalku aanu dhicin.
Dukumentiyada Mushaharka la Aqbali karo (sida ay u kala horreeyaan SBA):
Ganacsiyada xiisaynaya inay helaan amaah PPP:
Diiwaangelinta Canshuuraha ee Saddex-biloodlaha ah: 941 (2019, 2020 Q1)
Soo xaraynta Canshuurta Sannadlaha ah: 944 (2019)
Diiwangelinta Mushahar bixinta 12-kii bilood ee la soo dhaafay
Warbixinnada bangiga ee 12 bilood ee hore
Haddii aad tahay 1099 qandaraasle madaxbannaan ama shakhsi iskii u shaqeysta oo raadinaya amaah PPP, waa kuwan waxa aad u baahan doonto inaad ogaato:
IRS 1040 Jadwalka C
1099 (oo lagugu siiyay lacag)
Warbixinta dakhliga iyo kharashka 2019
Bayaanada bangiga akoontiga ganacsiga
Dukumeenti kasta oo dheeri ah oo loo isticmaali karo in lagu taageero kharashyadaada mushaar bixinta.
Talaabada 7: Ka raadi tilmaamo dheeri ah oo ka socda lammaanahooda ama deyn bixiyahaaga iimaylkaaga.
Marka lamaanahayagu uu caddeeyo oo uu habeeyo codsigaga, waxa ay u soo diri doonan goobtooda wax amaahiyaha ah, halkaas oo dayn bixiyaha PPP uu dooran karo in uu aqbalo oo uu ku siiyo deynta PPP.
Haddii codsigaaga uu aqbalo dayn bixiye, waxaad heli doontaa iimaylka xaqiijinta lamaanaha iyo/ama dayn bixiyahaaga.
Si aad u hubiso inaad heshay deyntaada, si taxadar leh u akhri iimayladan oo raac dhammaan tilmaamaha.
Goorma ayay tahay wakhtiga kama dambaysta ah ee codsiga PPP?
Codsiyada waa la aqbali doonaa ilaa Maarso 31, 2021, ama ilaa lacagaha la dhammeeyo, mid kasta oo soo hormara. Sharciga dabacsanaanta ee PPP ayaa la kordhiyay ilaa Janaayo 2021, dib loo furay barnaamijka (PPPFA).
Xeerka dabacsanaanta ee PPP, kaas oo la saxeexay sharciga Juun 5, 2020, waxa ku jiray balaadhinta hore ee barnaamijka loogu talagalay in la siiyo amaah-bixiyeyaasha doorashooyin badan.
Waagii hore, Xeerka Dabacsanaanta PPP waxa mar hore Koongarasku u isticmaalay:
Bixinta dayn-qaadayaashu waxay heli doonaan 24 toddobaad oo dheeraad ah si ay ugu qaataan lacagaha amaahda oo ay u qalmaan cafiska, laga bilaabo 8 toddobaad ee asalka ah.
Iska yaree qaddarka dayn-qaadeyaasha looga baahan yahay inay ku bixiyaan kharashyada mushaharka laga bilaabo 75% ilaa 60%.
U ogolow dayn-qaadayaashu inay u qalmaan cafiska xitaa haddii aanay awoodin inay sii haystaan ​​ama soo celiyaan shaqadooda (xaaladaha qaarkood).
Si aad habraaca ugu fududaato deymaha, cusboonaysii codsiyada cafiska.
Kordhi muddada amaahda laga bilaabo laba ilaa shan sano.
Ma dalban karaa Amaahda Labaad ee PPP?
Haddii aad hore u heshay amaahda PPP, waxa laga yaabaa inaad u qalanto wareegga labaad ee maalgelinta oo la mid ah ama ka badan qaddarka aad ku heshay amaahdaada kowaad (waxay ku xidhan tahay nooca ganacsigaaga).
Amaahda PPP-gaaga, tan waxaa loo tixraacaa sida "Bar-bar-qaadka Labaad."
SBA waxay caddaynaysaa in tani aanay ahayn deyn gaar ah, balse ay tahay barbarro deyntaada jirta.
Markaad codsanayso barbaro labaad, waa inaad isticmaashaa nambarkaaga deynta SBA-ga ee Sawirka Koowaad.
Yaa U Qalmi Doona Isku Aadka Labaad?
Haddii aad buuxiso shuruudaha soo socda, waxa laga yaabaa inaad u qalanto wareegga labaad ee maalgelinta PPP:
In ka yar 300 oo shaqaale ah
Horey u heshay amaah PPP (oo aad ka faa'iidaysatay ama qorsheynaysay inaad isticmaasho dhammaan lacagaha), iyo
La kulmay 25% ama dakhli ka badan hoos u dhac dartiis
Intee in le'eg ayaad ka heli kartaa amaahda PPP barbar-dhac labaad?
Meheradaha buuxiya shuruudaha waxay heli karaan lacag la mid ah tii aad ku samaysay barbaro XNUMXaad (marka la eego, waxay la mid tahay deynta labaad ee PPP).
Inta badan ganacsiyada u qalma waxay heli karaan ilaa 2.5 jeer kharashaadka mushaharkooda bishii.
Meheradaha leh nambarka NAICS ee ka bilaabma xarafka "72" waxa laga yaabaa inay u qalmaan ilaa 3.5 jeer kharashaadka mushaharkooda bishii.
Qodobkan ayaa lagu daray si loogu oggolaado ganacsiyada ay sida xun u saamaysay inay lacag badan helaan mar labaad.
Ma heli kartaa amaahda PPP haddii aad leedahay deymo kale?
Haa, xitaa haddii aad leedahay deymo kale, oo ay ku jiraan deynta SBA, waxaad u qalmi kartaa amaahda PPP. Si kastaba ha ahaatee, kama shaqayn kartid lacag caddaan ah labada dhinac iyo deymaha kale isku waqti isku mar. Haddii aad isticmaasho amaah musiibo (EIDL ama deyn hormaris ah) si aad u bixiso kirada ganacsigaaga bisha Febraayo, ma awoodi doontid inaad ka faa'iidaysato amaahda PPP si aad u daboosho kirada isla bishaas.
Waxa ugu fiican ee aad samayn karto wakhti ka hor inaad diyaariso cashuurahaaga 2021 ama 2022 ama ka codso warbixinta mushahar bixinta adeeg bixiyahaaga (haddii aad mid leedahay).
Haddii aadan haysan wax shaqaale ah, waxaad u baahan doontaa foom diyaar u ah in la soo raro 2021 ama 2022 1040 Schedule C form (canshuurtaada weli lama xarayn karo). Waxaad u baahan doontaa waraaqo isku mid ah iyo macluumaad haddii aad ka codsato Square Capital ama deyn bixiye kale.
Haddii aad raadinayso deyn labaad oo PPP ah, shirkaddaadu waa inay lumisay ugu yaraan 25% dakhligeeda rubuci 2020 marka la barbar dhigo isla rubucii 2021.
Waxaad tan ku samayn kartaa si asbuucle ah xisaab xidh saddex biloodle ah ama bayaanada bangiga, ama sanad walba foomamka cashuuraha sanadka oo dhan 2021.
Hubi in lambar kasta oo aad geliso codsiga ay gabi ahaanba la mid tahay tirooyinka ku qoran warqadaha taageerada. Waxa kale oo muhiim ah in la geliyo dhammaan dukumeentiyada khuseeya inta lagu jiro nidaamka codsiga. Waraaqaha khaldan waxay sababi karaan in codsigaaga dib loo dhigo.
lendio.com - Hagahaaga Tallaabo-tallaabo ee Dalbashada Amaahda PPP
lendio.com - Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato PPP
sba.com – Sida loo Buuxiyo Codsiga Amaahda ee PPP
13 Ka Dukaameysiga Cunnada Khadka Tooska ah Ee 2022 | La cusbooneysiiyay
Sida Loogu Iibiyo Kaararka Hadiyada Lacag caddaan ah 2022
Dib-u-eegista Is-Bixiyaha Is-beddelka 2021: Is-Bixiyaha Is-Bixintu Ma Xalaal baa mise Waa Khiyaamo Dhise Amaah Kale
Haddii aadan lahayn deyn ama dhibco waxyeelloobay, waxay kugu adkaan kartaa inaad hesho kaarka amaahda amaahda.…
Maxay Ka Dhigan Tahay Dhaqaale Gaadhi | Ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
Markaad qaadato amaah baabuur, jadwal qorshe dib-u-bixineed, oo lagu daray dulsaar iyo kharash kasta, gudaha…
Midowga Deynta Ciidamada Badda ayaa malaayiin xubnood oo adduunka oo dhan ah ku leh. Saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa…
Waa maxay Doorka Qoraalka amaahdu?
Ma gashay xaalad aad lacagtaada amaahday oo aad ka furatay? Hagaag, taasi waxay dhacday…
Waa maxay dib-u-maalgelinta amaahda Ardayga, sideese u shaqeysaa?
Dadka aan haysan kayd lacageed oo badan oo loo hayo waxbarashadooda dugsiga sare ka dib, iyaga oo bixinaya…
Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2022
Dadku waxay u malaynayaan in sababta kaliya ee aad dayn u qaadanayso ay tahay inay awood kuu siiso inaad waxbarashadaada sii kordhiso. Tani maaha…